USA: Missouri inogamuchira mutemo wekubvisa pamuviri - TELES RELAY
HOME » pasi rose USA: Missouri inogamuchira mutemo wekubvisa pamuviri
Mamiriro eMissouri anotevera mumakwara ezvinyorwa zveAmerica zvakachengetedza, zvakadai seAlabama kana Georgia, izvo zvinoda kudzorera nyaya yacho kuDare Repamusorosoro.
Nyika ine AFP Yakatumirwa nhasi pa 21h56
Vaparidzi vanofamba nemakorodhe e Missouri Capitol musi weChishanu 17 May 2019, muJefferson City, zvichipesana nemutemo unorambidza kubvisa pamuviri mumavhiki masere ekuzvimba. DHAVHIDHI A. BHAI / AP
VeMaparamende vakapinda mutemo wekudzikisa pamuviri weChishanu, 17 May, achitevera kutungamirirwa kwevanhu vanoverengeka veUnited States, avo vakadai seAlabama kana Georgia, vanoda kuunza nyaya yacho kuDare Repamusorosoro.
Mutemo unorambidza vanachiremba kuti vaite kubvisa pamuviri vachizvipira (kubvisa pamuviri) mushure mevhiki yechisere, chiito chinorangwa kusvika makore gumi nemashanu mujeri. Kune zvipo zvekurapa kwekukurumidzira, asi kwete nekuda kwevanoshungurudzwa kana kubatwa.
Verenga zvakare Kuti kodzero yekubvisa pamuviri inodzokera sei muTrump's America
Mashoko acho achiri kuda kubudiswa neRepublican Governor Mike Parson, muvengi anotyisa wekodzero yokubvisa pamuviri uyo achangobva kuzvirumbidza pachake Twitter kuti yakaderedzwa kubva ku 20 000 kusvika ku3 000 nhamba yekubvisa pamuviri kunoitwa gore negore muhurumende yake.
Mutemo unofanira kukurumidza kuputika nematare, sezvo inopesana nezviratidzo zvekutonga kweDare Repamusorosoro, Roe V. Wade, uyo akatonga kodzero yekubvisa pamuviri mu1973. Asi chinangwa cheMissinia, mamiriro ekumaruwa uye chechitendero chiri pakati penyika, ndekukumbira kuDare Repamusorosoro kumubvumira kuti aongorore zvakare chisarudzo ichi.
"Torrent yemitemo yakanyanya"
Mukufunga kwakadaro, Alabama (South) ichangobva kupedza mutemo unorambidza kubvisa pamuviri kunze kwekuda kwehupenyu hunotyisidzira amaiane mitsara yemakore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe mujeri kunechiremba.
Chirevo chakachengetwa kune vatinyoresa Verenga zvakare Pasi pemutemo unopesana nekubvisa pamuviri weAlabama, mhirizhonga yepamutemo yekumanikidza ruoko rweDare Repamusorosoro
Pasinei nokutyisidzirwa kwekurohwa muHollywood, kuGeorgia, uko kuputika kwakawanda kwakaitika, zvaive zvarambidza kubvisa pamuviri pakarepo apo mwoyo wemucheche inogona kuonekwa, kana kuti yevhiki yechitanhatu yekuzvimba, nhandare umo vakawanda vakadzi vasati vachiziva kuve nepamuviri.
Kubva kutanga kwegore, mitemo yakafanana yakaparidzwa muOhio, Kentucky ne Mississippi. "Iri rwizi rwemitemo yakanyanyisa ruchaenderera mberi"inofanotaura nezveGittmacher Institute, iyo inotsigira kuwana ruzivo rwehutano hwekubereka.
Verenga zvakare Kubvisa pamuviri: mumifananidzo, zvirevo zvevanhu veAmerica
Izvo zvechitendero zvakagadziriswa nekupinda muDare Repamusorosoro revatongi vaviri vakagadzwa nemutungamiriri wehurumende, Donald Trump, uyo akaisa temberi yemutemo mumusasa wekuchengetedza (vatongi vashanu kubva pavapfumbamwe).
Munguva yehutungamiri hweHCUMUMX, mutongi weRepublican billionaire akanga atora pamusoro pemasikirati akachengeteka achivimbisa kuisa vatongi kumativi ose ekudzivisa kubvisa pamuviri.
Verenga zvakare MuUnited States, "Sarudzo dzaDonald Trump dzakagadzirisa kupesana nemimba"
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.lemonde.fr/international/article/2019/05/17/etats-unis-le-missouri-adopte-a-son-tour-une-loi-restrictive-sur-l-avortement_5463689_3210.html?xtmc=etats_unis&xtcr=1
Meghan Markle: Asati azova mudzimai weChristina Harry, vanyori vese
India: Imwe ndege inoti yakamupa rubatsiro | India News
Maminitsi 3 kunzwisisa 20 May 2019 - VIDEO
Mumwe mukadzi weMinnesota akapa mhondi yake kune mumwe mudzidzi anopisa moto uyo akakurumidza kunobatsira mwanasikana wake apedza kubatwa.
10 mahotera mafiropu apo mafirimu emitambo yakaitwa